Wararka Maanta: Talaado, Jan 7 , 2020-Senatarada aqalka sare ee kasoo jeeda Puntland oo ka hor yimid meel marinta sharciga batroolka Soomaaliya
Guddoomiye ku xigeenka guddiga kheyraadka qaranka, Senator Maxamuud Mashruuc ayaa sheegay in si fool xun loogu xadgudbay xeer hoosaadkii aqalka sare, ayna koox katirsan barlamaankooda kasoo shaqeeyeen in sharcigaas iyadoo aan laga tashan uu meel maro.
" Anigoo matalaya senatarada Puntland, waxaan halkaan ka caddeynayaa in aan sharcigaan kasoo horjeedno, maamulka aan kasoo jeedno ee Puntland isagana sidoo kale uu mowqifkaas nala qabo." ayuu yidhi senator mashruuc.
"Sharcigaan waa sharci lagu boobayo kheyraadka qaranka. Waa sharci wasiirka bartoolka kaligii u oggolaanaya inuu saxiixo heshiisyo bilyanis ku baxaya. Waa sharci oggolaanaya in shirkado qowlaysato ah lasiin karo baloogyo," ayuu hadalkiisa ku daray.
Senator Mashruuc ayaa tilmaamay in wasaaradda batroolka oo uu sheegay in ay saameyn ku lahayd sharcigaan meel marintiisa ay ku guulaysatay in mooshin lagasoo gudbiyo xubnihii ku doodayay in sharciga laga saaro meelaha uu ka dhaawacan yahay ee mugdiga galin kara kheyraadka ummadda Soomaaliyeed.
Wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in uusan saxiixin sharcigaan illaa lagu daro qodobadii guddiga kheyraadku soo saareen ee laga hor istaagay in lagu daro sida uu sheegay.
Barlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa sharcigaan horey u ansixiyay, waana sharcigii ugu horeeyay ee batroolka Soomaaliya lagu maamulayo tan iyo dowladdii dhexe, inkastoo aan la ogayn sida uu ku dhaqan galidoono sharcigaan oo hadda muran uu ka taagan yahay.